SingForYou.net - Yangon Thar
By : moeluu on May 22, 2010
Yangon Thar's Description
♪♫ it's Me, Yangon Born..☺♫♪ Haveagood time!
nyanwynn7 on Mar 2, 2014 0
ကျနော်လဲ ဆိုဖို့ တယောက်ရှာမှပဲrnဘော်ဒါ ဆိုထားတာကောင်းမှကောင်း
mungpi19 on Sep 15, 2010 0
Hi bro your vocal is so nice, perfect
aungtun1 on May 23, 2010 0
brother ko moeluuu,, your vocal is so stable,,,, so nice to listen ...... bro,,*********
kyalsinlinn on May 23, 2010 0
ရန်ကုန်မှာ...မွေးတဲ့ကျွန်တော့်ကို..အညာမှာမွေးတဲ့..နွားက..မကြည်သလိုစိုက်ကြည့်လို့ ဝင်ခွေ့ တယ်...အယ်ဟုတ်ပါဘူး..သီချင်းမှားပီ...ဟိဟိ...ဘရာစာ ကြီးဆိုသွားတာ.. အရမ်းမိုက်တယ်ဗျို့ ... ရှယ်ပဲ... ညီအငယ်ဆုံးလေးလာအားပေးသွားပါတယ်ခင်ဗျ....
ayoelay on May 22, 2010 0
Nice, cool, great as well as always! somemore it was cute & lovely! StArs*****************************************************************************
အဘယ်အကြောင်းကြောင့်မမဂျီးနှင့် မရှိုရပါသနည်း ???? တိကျင်ပါသည် :P အမြန်ဆုံးဖြေကြားပေးပါရန်။။။။။။ အဟီးဟီးဟီး:)))))))******** ဘရာဗိုဗိုဗို ဘရိုဂျီးးးး;း;း;း;း; :atb >>>>>>>>>
yellownavy on May 22, 2010 0
Very entertaining, Ko Moe Luu! Enjoyed it... 5*
komoelu yay solo sing htar tar le mite tel .... try duet as well with sis *************************
myobala on May 22, 2010 0
ကိုမိုးလူရေ....အရမ်းမိုက်တယ်ဗျ.....ကျွန်တော့်ညီမလေးနဲ့ တွဲပြီး နောက်တခေါက်လောက်ဆိုပါအုန်းနော်....ကျွန်တော့်ညီမကိုထားပြီးတော့ ကြည်လဲ့လဲ့ဦးနဲ့ပဲတွဲချင်နေတယ်ပေါ့.....မရဘူးနော်....ဗလ အကြောင်းသိသွားမယ် ဟင်းဟင်း(ကိုမိုးလူရေ စတာနော် စိတ်မဆိုးပါနဲ့ အရာရာအဆင်ပြေပါစေဗျာ.....)
really nice2listen par .shint.... arr pay narsin thwar par tel .. 5***** :-)
maung309 on May 22, 2010 0
Great job... Ko Moe Luu yay... very nice par.. ***********4U
mrcastle on May 22, 2010 0
really fantastic song & sang really great ! like it !
Kg tal byar..so htar tar Shal bea'..arr pay nar sin twar par tal..help p sing pay tea' kg ma lay ka lea chaw tal naw..:P*********For Bro
ကိုမိုးလူ သီ ဆိုသွားတာ နားထောင်လို့အရမ်းကောင်း တယ်~ yeah i hadagood time listening . ကောင်း လွန်း လို ပ ရိတ် သတ် ကြီးက မမHZ နဲ. နောက် တ ခေါက် ဆို ဖို ပွဲ တောင်း နေ ကြ တယ် ။ သီ ဆို မှု က ရှယ် ဘဲ ...
ဝိုး!ဘရိုကိုမိုးလူကကြည်လဲ့လဲ့ဦးနဲ့ဆိုသွားတာကို~အားကျတယ်ဗျာ~းP~~ နားထောင်လို့အရမ်းကောင်းတယ် bro ရေ~ အားပေးနားဆင်သွားပါတယ်~~*********း)
mmphone on May 22, 2010 0
ko aung very good... nice voice
yangon tar bro ko moeluu yay really nice to sing arr pay thwar par tel shin*******4u......:)))))
wadanar on May 22, 2010 0
YANGON tar gyi Ako MoeLuu yay... so twar tar very good byar..NICE!!!
koaungkhaing on May 22, 2010 0
ကိုမိုးလူရေ..ကျနော့်လိုပဲ ဒီကီးက ကျနော့်တို့အတွက် နိမ့်နေတယ်... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုသွားတာ သိပ်ကောင်းပါတယ်... စုံတွဲ အသံသွင်းထားတာလဲ မိုက်တယ်... ရန်ကုန်သား ကိုမိုးလူ အောင်ကြူကြူ တော့ မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလား... တနေရာမှာ မန္တလေးမြို့က ဖုန်ထူ...သွေးတွေသံတွေ...ဆိုပါ့လား..ကြောက်စရာကြီး
moeluu on May 23, 2010 0
Thanks, ko)aungkhaing, u hv not only good vocal but sharp ear too.. :) ur comments are always welcome!.. haveanice weekend!
Great as ever brother !!!!!!! So you are Yangon Born >>>>:P
:dududu...."Yangon tar nelz Mandalay thu":))))......Funny movie clip lay nelzz...perfect sang bro moeluu....all cheerss &bravooooo :***:***:****:***:)))
moekgkin on May 22, 2010 0
great one par bro moeluu yay..so twar tar ar yann kg par del..arr pay twar p..*****
I hope you are not that heavy. :-) ***** :-)
You are RIGHT!.. ko)TTL, and thanks for ur cherish comments, ever.. haveagood time!
Feedback : 75